Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » ‘बेसारे फोटो’ अभियान प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा कि विरोधमा?
‘बेसारे फोटो’ अभियान प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा कि विरोधमा?
काठमाडौं, असार १० । एक सातादेखि नेपालीहरुको सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट ‘बेसारमय’ छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभामा बोल्दै कोरोनासँग लड्ने सन्दर्भमा बेसारको उपयोगीताबारे लामै गफ दिएका थिए ।
यो एप प्रधानमन्त्रीले भाषणलाई उडाउनकै लागि बनाइएको पनि होइन । न यो कुनै नेपालीले बनाएको हो । पहिल्यैदेखि चालु रहेको एपलाई नेपालीहरुले चर्चामा ल्याइदिएका मात्र हुन् । यस एपबाट अरु किसिमले पनि तस्वीरहरुसँग खेल्न सकिन्छ । यो नबुझेका कतिपयले चाहिँ मलाई फलानोले बनाएर पठाइदिएको भन्दै क्रेडिट पनि दिइरहेका छन् । अनलाइनखबरबाट